Su’udii Aabiyaa Makka; Hiree baqattoota Oromoo Kana fakkaata – Welcome to bilisummaa
Su’udii Aabiyaa Makka; Hiree baqattoota Oromoo Kana fakkaata
bilisummaa December 5, 2013	1 Comment
Previous Saudis expel 100,000 illegal Ethiopians
Next The Official Statement of Oromo Studies Association Regarding the Codification of Afaan Oromo by the British Council
Oromonni Biyyaa Sa,udii jiran rakkoo guddotu harka qaba Inni dura biyya ofii keysatti mirga hin qaban Inni lammaffaa biyya anmbaa keysatti Heeraa hin qaban Oromonni fakkenyaaf Biyya Sa,uditti jiraatan 100% 70 Baasaportii somaaleeti qaban . Motummaan Somaalee Dhiibbaa gara motummaa wayyaaneen irratti gadgeyfameen bara 2014 keysaa baasaportii isaanii nama somaalee hin tahiniirraa gurrachuuf, haalaa kanaan ilmaan oromoo hedduun heera dhabuuf ni saaxilaman . maalif sababni isaas Iyyannaa Gara Motummaa Ethiopia galfatanii Motummaan Ethiopia baasaportii waan dhorkatamaniif,,,Rakkoo hamtuuf saaxilamaa jiru,
kuni osoo akkannaan jiru Enmbaassiin wayyaanee Riyaad jirtu Dabballota isii ummata keysa bobbaasuun oromota gosaafii kutaan addaa qoqqodaa jirti. Fakkenyaaf Oromota kutaa walloo bakka lamatti baaftee warra Afaan Oromoo Dubbatu fii Warra Afaan Amaaraa Dubbatu Addattii jaartee itti tabataa jirti irraahisi horii omishachaa jirtii .. Oromota kaaniis kutaan adda qoqqoduuf qophii xumurataa jirti .
Harargee Fii Arsii Baalee Jimmaa Walloo Wallagaa kutaalee Oromiyaa kanneen irraa ummanni biyya kanatti argaman maallaqa 50,0000 mataan mataan kutaan hundi akka baasu irratti murteysitee daabballota isii keysa gadi dhiiftee irraa funaanata jirti.Garuu dabballonni isii kuni bakka heddutti mikaawuu dhabudhaan bakka gariitti Sabbonotaa ilmaan Oromoon niis tumamanii jiru ..
Gaaffii itti dhihaatteefiis hawasarra debi,ii dhabudhaan hongawanii dabballonni kuni horii dhunffaa isaanii baasudhaaf dirqamaniille bifumaa fedheenuu haatahu waarra wayyaanee gammachiisuuf murteyfatanii jiru.
Motummaan wayyaanee kijibaan hawaasaa oromorraa waa funaanachuu itti fuftullee itti milkaawuu hin danye. haalli isii kuni hedduu hasawasa oromo biyya sa,udii mufachiisee jira.
isii ummata kenya kanneen asii qabamanii biyyatti galan waan takkaa godhaafii hin jirree ,kan tigrota qubsiisaa jirtu ilmaan Oromtiin namu gara godinaa keysanii gala jattee qarshii 900 ofirra galchaa jirti.
Gara biraan qotee bulaa oromorra mana manatti Qarshii 500 warreen buqqa,anii biyya sa,udiirraa dhufan qubsiisna jechuudhaan horii irraa guurachaa jirti ..
Leave a Reply to Ibsaa Cancel reply